Homeसमाचारदिनभरि माछा मारेर २ सय पनि नकमाउने, लछुमनलाई जब साढे ५ करोड कर छली गरेको पत्र आएपछि…
March 28, 2021 admin समाचार 4886
माछा मा’रेर परिवार पालिरहेका तामाकोसी गाउँपालिका–१ भिरकोटका लछुमन माझी वि’रुद्ध पाँच करोड ५६ लाख कर छलीको मु’द्दा लागेको छ। उनका छिमेकी पनि आफूमाथि कस्तो मु’द्दा लाग्ने हो भनेर भयभीत छन्। भूकम्प पीडितका नाममा १० देखि ३० हजार राहत दिएर उनीहरूको नागरिकता संक’लन गरिएको थियो।
तर, त्यही नागरिकताका आधारमा कम्पनी खो&लेर अर्बौँ कारोबार गरी करोडौँको राजस्व छ’ली भएको छ । यस्तै गिरोहले बाराका विपन्न दलितका नाममा कम्पनी खोलेर एक अर्ब चार करोड रा’जस्व छली गरेको थियो। भूकम्पबाट अतिप्रभावित दोलखामा जेठ–असार ०७२ मा राहत दिने भन्दै गि’रोहले तामाकोसी किनारको माझीबस्तीबाट नागरिकता सं’कलन गरेको थियो।
तामाकोसी भिरकोटका लछुमनले पनि नागरि’कता दिएका थिए। तर, करिब साढे पाँच वर्षपछि गत मंसिरको अन्तिम साता उच्च अ’दालत पाटनबाट म्याद तामेलीको पत्र आयो। राजस्व अनु’सन्धान विभागले उनी ‘वि’रुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतको पत्रमा लछुमनको नाममा रहेको पिआरके ट्रेड इन्टरनेसनल कम्पनीको स्था’यी लेखा नम्बर ६०५४२८२७२ बाट कर छली गरेको उल्लेख भए पनि रकम खुला’इएको थिएन।
१५ दिनभित्र अदालतमा उप’स्थित हुन भनिएको थियो। दिनभरि माछा मार्नमै व्यस्त रहने नि’रक्षर लछुमनले राजस्व छलेको पत्र आएपछि गाउँ नै अ’चम्ममा प¥यो । निरक्षर उनको पत्रसमेत अरूले पढिदिए। उनले कर छलेको भनेर पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा परेको थाहा पाएपछि पूरै गाउँ आ’श्चर्यचकित प¥यो। छिमेकी र स्थानीय जनप्रतिनिधिले पत्रबारे आन्तरिक राजस्व वि’भागमा बुझेपछि गाउँले थप चकित बने।
किनकि लछुमनको कम्पनीले पाँच करोड ५६ लाख कर छली गरेको विभागबाट ब’ताइएको थियो। ‘दिनको दुई सय कमाउन धौ–धौ भएका हामीले सर’कारको त्यत्रो पैसा हिना मिना गरेको सुनेपछि त हामी छाँगाबाट खसेझैँ भयौँ,’ लछुमनकी पत्नी मिठुले भनिन्। भूकम्प’पीडितको रूपमा राहतका नाममा उनीजस्तै अरू सातजनाले पनि गिरोहलाई ना’गरिकता दिएका थिए। हुन पनि लछुमनले उनको भनिएको कम्पनीको नामसमेत पहिलोपटक सुनेका थिए । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा दोल’खाबाट श्याम खतिवडाले लेखेका छन्। – इताजाखबरबाट
गायिका डाक्टर त्रिशला भन्छिन्- सेलिब्रेटी हुँ भन्ने एटिट्युड कहिल्यै आएन (भिडिओ हे’र्नुहोस्)
उकालो लाग्दै कोरोना ग्राफ, टेकु अस्पताल भर्ना हुनेमा अ’धिकांश शिक्षक
बेहुला आए, दाइजोमा १ रुपैयाँ मागे र बेहुलीलाई हेलिकप्टरमा उडाएर बिदा भए….
August 31, 2020 admin समाचार 17051
१०९ औं अन्तर्रा’ष्ट्रिय नारी दि’वस मनाउँदा’सम्म पनि हाम्रो समा’ज दाइजो प्रथाबा’ट पी’डित छ । दाइजोकै कारण हाम्री छोरी’बहीनीहरुले प्र’ताडित हुनुपरेका घटना सुन्दा मन कुँडि’एर आउँछ । दाइ’जोकै कारण जि’उँदै जल्नु’परेका जस्ता नमिठा घ’टनाहरु समा’जमा व्याप्त
आज पनि बढ्यो डलरको मूल्य, हे’र्नुहोस कुन देशको मुद्राको मूल्य कति ?
June 2, 2021 admin समाचार 4778
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबा’रका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तो’केको छ । तोकेको विनिमय दर अनुसार आज अमेरिकी डलरको मूल्य मंगलबारको भन्दा बढेको छ । मंगल’बार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११५ रूपैयाँ ८८
श्रीमानले रुँदै अन्तरवार्ता दिएको भिडियो बाहिर आएपछि, घर छाडेर हिडेकी श्रीमती अन्नत फ’र्किइन् (हे’र्नुहोस भिडियो)
June 8, 2021 admin समाचार 4173
रामेछापका आयुस सुनु’वारले दश दिन देखि हराएकी श्रीमती फेला पारेपछि निकै खुसी भएका छन् । सानो छोरा समेत लिएर हिडेकी उनको श्रीमती मि’डियामा उनका श्रीमान रोएको देखेर फर्केर आएकी छन् । श्रीमानले तिमी जहाँ भए